Malawi Mepee maka Njem Mba Nile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Malawi Mepee maka Njem Mba Nile
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ gbasara Malawi • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọdọ mmiri Malawi
Emepere ọdụ ụgbọ elu mba Kamuzu dị na Malawi maka njem ụgbọ elu azụmahịa nke Septemba 1, 2020. Naanị ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ole na ole ka enyere ikike iji rụọ ọrụ nke mbụ na September 5.
A chọrọ ndị njem niile na-abanye na Republic of Malawi ka ha mepụta akwụkwọ nnwale SARS Cov-2 PCR na-adịghị mma nke enwetara n’ime ụbọchị iri tupu ha erute Malawi. A ga-ajụ onye ọ bụla njem na-enweghị asambodo ahụ.
Ndị njem ga-abịarute ga-aga n'ihu na-akpọpụ onwe ha iche ruo ụbọchị iri na anọ nke ndị ọrụ ahụike ga-agbaso ha.
Enwere ike ịchọrọ ndị njem iji nye ihe nlele maka nyocha COVID-19. A ga-achịkọta ihe nlele na ọdụ ụgbọ elu ma kọwaa nsonaazụ ule na ndị metụtara ndị ahụ n'ime awa 48. A ga-edozi ndị njem ọ bụla na-arịa ọrịa dịka ụkpụrụ nduzi ndị ọrụ ahụike siri kwuo.
Ndị njem ga-ejupụta ma dowe mpempe akwụkwọ nyocha njem (TSF) nke a ga-ewepụta n'ụgbọelu ma ọ bụ n'ụlọ ọdụ ụgbọ elu. A ga-enyefe ndị ọrụ ahụ ike nọ n'ụlọ ahụ mpempe akwụkwọ ahụ.
A chọrọ ka ndị njem niile na ndị na-ahụ maka ọrụ debe usoro iwu nchịkwa ọrịa dị ka ịwepụ mmekọrịta mmadụ, ịsa aka na ịdị ọcha, na iyi ihe mkpuchi dị mkpa. A ga-enyochakwa ahụ ahụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
Citizensmụ amaala US chọrọ itinye akwụkwọ maka ndọtị visa ma ọ bụ ndọtị ikike obibi nwere ike ịga na ọfịs ọpụpụ ọ bụla dị na Malawi ka itinye akwụkwọ. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na Malawi Immigrashọn webụsaịtị: https://www.immigration.gov.mw/
Enweghị oge a na-alọta na mgbochi na mgbochi ma ọ bụ na njem etiti mba. Nhọrọ ụgbọ njem ọha na-oke oke na Malawi. Ndị na-arụ ọrụ bụ obere obere bọs, nke tagzi, na tagzi. A na-atụ anya ka ụgbọ ala na-ejedebe ndị njem ma chọọ iji ihe nkpuchi na ụfọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
A machibidoro ememme, ihe omume egwuregwu, na nnukwu ọrụ ndị ọzọ nwere ihe karịrị mmadụ iri napụrụ iwu okpukpe na olili. Ọrụ abụọ ikpeazụ a nwere ike ịnwe ihe ruru ndị bịara 10 nyere ndị mmadụ n'otu n'otu na-agbaso mmachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na usoro ịdị ọcha.
Emechiri ebe nri ngwa ngwa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, na ebe a na-eri nri ọha ma ewezuga ọrụ iwepụ. Gọọmentị Malawi etinyekwala iwu na-eme ka mkpuchi ihe mkpuchi ihu na ebe ọ bụla dị mkpa, ndị na-agbasoghị ụkpụrụ nduzi ndị a nwere ike ịkwụ ụgwọ. Enwere ezi ego nke 10,000 MWK (US $ 13) ma ọ bụrụ na onye ọ bụla emeghị ihe kwekọrọ na iwu gọọmentị Malawi banyere mmachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na iwu ịkpa mkpuchi ihu.
Na Malawi, enwere okwu ikpe 5,576 akwadoro nke COVID-19 na mba ahụ niile nwere ndị ọrịa 3,420 gbaghaara na ọnwụ 175 metụtara ya na Septemba 1, 2020. Gọọmentị nke Malawi etinyela usoro iji belata mgbasa nke nje a.